Nna m, Ma hogan anyị, eleghị anya nwere a cognitive nkwarụ — HunterThinks.com
Nna m, Ma hogan anyị, eleghị anya nwere a cognitive nkwarụ
Nna m, Ma hogan anyị, ugboro ugboro nkwa inyere m n'ụzọ zuru ezu naghachi, ọ mgbe niile agbajikwa nkwa ya. N'agbanyeghị eziokwu na m m arịa ọrịa, ogbenye, na-adịghị ike, na-esighị ike, ma ọ bụ nnọọ ọgaranya na nwere ike, o kwuru na ya ga na-enyere m aka ma m na-erube isi ya nile aka ike ọnọdụ. N'oge gara aga, M zutere ya aka ike ọnọdụ, ma ọ gbanwere ọnọdụ mgbe m zutere ha. Na-adịbeghị anya ọnwa, ọ kwụsịrị agwa m ihe m ya aka ike ọnọdụ dị. Ọ sịrị na ya ga-enyere m aka ma m ekwe ya ka o nyere m, nke bụ ihe nzuzu n'ihi na anaghị m na-egbochi ya na-enyere m.
A ole na ole oge gara aga, ọ ọzọ zitere a nkwenkwe ụgha ozi m. O zitere m aka site n'izite US $ 50. Ọ maara na m na-adịghị nri, na nkà mmụta ọgwụ, ndo, ma ọ bụ ego, na o we ziga ego mgbe m n'ihu ọha jụrụ maka enyemaka. Ọ maara na-eziga ego na-enyere aka m. Na ego, Otú ọ dị, o dere, “Anyị na-enye nke ndo, uwe, nri, [na] (sic) na nkà mmụta ọgwụ bụ ka gị na-anabata. Ka anyị nyere gị aka.” (ọ lụgharịrị, n'ihi ya “anyị” na “anyị.”)
M nwere ugbua “nabatara” multiple rịọ si ya na zutere ya aka ike ọnọdụ. Ọ na-akọwa ihe ọ bụla ọhụrụ ọnọdụ m ga-izute tupu ọ ga-ekpebi na anaghịzi m mkpa na-ata ahụhụ site na a pụrụ ịgwọ ọrịa na na-na nile n'ihe ize ndụ nke mmekọahụ wakpo, batrị, na-ezu ohi, na ọnwụ. Ọnọdụ ya maka inyere m bụ na m na-ekwe ka ya na-enyere m. taa, o chetaara m-na-enyere m-na ọnọdụ ya maka inyere m bụ na m na-ekwe ka o nyere m aka-nke m kwere. Ee, ọ bụ a ezi uche na nkwupụta.
Ogologo oge, Na m kweere na nna m, Ma hogan anyị, bụ nanị ịbụ obi ọjọọ m. ugbu a, M na-eche nsogbu yiri a cognitive nkwarụ metụtara afọ ndụ ya. Omume ya bụ kpọmkwem otu dị ka iti mkpu, “m bụghị iti mkpu!” O zitere a ozi m-na ego Enyemaka m-agwa m na m ga-ekwe ka o nyere m aka. O mere nke a kpọmkwem edinam ọtụtụ ugboro maka a afọ ole na ole. M kwuru na absurdity ọtụtụ ugboro, ma ọ kwetara ya enweghị isi na ọdụ omume ma ọ bụ gbanwee nonsensical okwu. Ya mere, nke kacha mma nkọwa bụ a cognitive nkwarụ. (N'ihi na a tụnyere, -ahụ nke a video banyere Donald opi nke cognitive impairment.)
Ebe a bụ a ele mmadụ anya n'ihu ndepụta ozi o zitere m eji ya ezi uche asụsụ:
taa 14 April 2019, “Ka anyị nyere gị aka.”
2 April 2019, “Ka m nyere gị.”
27 March 2019, “ka m nyere gị”
29 June 2018, ” M zitere gị a proton email na ihe na-enye nkwado.”
22 November 2017, “Ka m nyere gị”
Nna m, Ma hogan anyị, bụ bara ọgaranya iji ziga m ọtụtụ puku dollar taa, nke ga-ezuru m na-agwọ ma na-onwe-zuru ezu. Ma ọ nwere a cognitive nkwarụ ma ọ bụ na ọ bụ ya bụ nanị a jọgburu onwe onye, ịtụwa ka anyị kwere na ọ ga-akwado m na-agbake. M mkpa nkwado gị.
Categories Ma hogan anyị, nna m, Ndụ m Tags Abuse, Ma hogan anyị, Nsogbu, Enweghị Ebe Obibi, Poverty, Robbed, Sexually assaulted post igodo